Tendrombohitra Portiogey nandresy loka | Vaovao momba ny dia
Tora-pasika Portiogey nahazo loka
Ny morontsiraka Portiogey amin'ny faritry ny Faritra Atlantika an'ny Madeira, nahazo loka koa ny sainan'ny fikambanan'i sainam-pirenen'i Eropa amin'ity taona ity
Ny antsoina hoe Blue Flag program ho an'ny marinas sy ny morontsiraka dia novolavolain'ny Foundation for the Fampianarana tontolo iainana, FEE, fikambanana izay tsy mampiasa tombony amin'ny lafiny rehetra. Misy fiandohany ao Frantsa fa efa novolavolaina nanerana an'i Eropa nanomboka ny taona 1987.
Ireo tanàna izay manana sainam-pirenena be indrindra dia Santa Cruz sy Funchal, misy sainam-pirenena efatra, arahin'i Porto Santo akaiky miaraka amin'ny roa, hamaranana azy Punta Sol, Santana na Porto Moniz izay manana saina iray monja.
Ankoatry ny morontsiraka dia marinina roa miavaka amin'ireo rehetra ao amin'ny faritra ihany koa no nomena, toy ny Quinta do Lorde, amin'ny Caniçal na Funchal.
Ity programa ity dia mikendry ny hampiroborobo ny fiaraha-miaina amin'ny torapasika amin'ny fampivoarana ny fizahan-tany sy ny fanajana ny tontolon'ny faritra, eo an-toerana sy ny firenena amin'ny morontsiraka, farihy na faritany rehetra amin'ny alàlan'ny fanabeazana, ny zom-pirenena ary ny fahadiovana. Ny morontsiraka rehetra nahazo loka dia mirehareha an'io isan-taona, miaraka amin'ny rano madio mangarahara sy ny fasika tsy misy tomika toa ny karipetra mena.
Efa manana fanentanana iray hafa hankafizana ireo torapasika mahafinaritra any Portiogaly isika, izay hananantsika fotoana hahitana ireo zorony tsy manam-paharoa sy majika na dia tsy dia malaza toa ny sasany aza izy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tora-pasika Portiogey nahazo loka
Bisevo Blue Cave, Kroasia
Medjugorje, toerana fivahinianana masina any Bosnia-Herzegovina